Amagama aqobo ngesiZulu — Oxford Dictionaries isiZulu forum
Ikhaya › Izihumusho
Amagama aqobo ngesiZulu
September 2016 kokuthi Izihumusho
Ngifuna ukuthola amagama aqobo ngesiZulu kulamagama alandelayo:
1) Table (currenty derived from Afrikaans - itafula)
2) Knife (currenty derived from Afrikaans - ummese)
3) Scissors (currenty derived from Afrikaans - isikele)
4) Salt (currenty derived from Afrikaans - usawuti)
Siyavuma! Asghar 1983 uzokhumbula ukuthi la magama etshelekiwe njengoba usho nje. Ngakho uma selize lemukelwa igama njengelisemthethweni olimini nakuba letshelekiwe kolunye ulimi kusale sekusetshenziswa lona lingabe lisaqanjwa elinye kwesinye isikhathi. Nokho ukubona kwami lokhu. Sizoke sibheke ukuthi akekho yini ongasisiza ngalokhu. Nawe ungabe uzama engxenye mhlawumbe singethuka sesiwathola nje kwazibani.
Kuboshelwa inja nogodo ukuhumusha!
1) Ngokwesiko lesiZulu ukudla kwakuvama ukudliwa esithebeni nasecansini, vele ngakho singayibiza itafula njengesithebe sesilungu, okusho ukuthi amasiko amaZulu avela kuqala ngqa nxa siyakhuluma ngesiZulu. Lokho bakwenza nje abelungu nxa bayakhuluma ngesilungu basho ukuthi "Zulu spoon", "Zulu broom", njalonjalo kanti kithina sithi ukhezo, nomshanelo.
2) Ukuphawula ngokwesiko futhi, inyama yasikwa ngomhubhe, okuwummese wesiZulu. Ungathola kabanzi ngalokho encwadini "Inqolobane Yesizwe"
3) kwaaa angazi ngaleli kodwa tlll. Isisikele yisisikele phela. Sasingekho emlandweni wethu kuleli lizwe lethu isisikele ngakho sisasichaza ngegama elisukile esilungwini.
4) Itswayi noma utswayi
Igalelo lakho liyezwakala impela. Nathi sifunda lukhulu lapha kuwe. Siyacela ukuthi uqhubeke usicobelele ngoba le nkundla eyomphakathi wonkana okhuluma isiZulu nalowo ongathanda ukusifunda ngakho lokhu kufaka kwakho isandla lapha kuyasithokozisa impela.